माई टाउन वर्ल्ड एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [खेल] - लुसो गेमर
एन्ड्रोइडका लागि My Town World Apk डाउनलोड [खेल]
के तपाईंले कहिल्यै विभिन्न भवनहरू निर्माण गरेर आफ्नो सपनाको संसार बनाउने योजना गर्नुभएको छ? यदि हो तर वास्तविकतामा त्यसो गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यहाँ हामीले यो उत्तम अनलाइन स्रोत ल्याएका छौं। अब My Town World Apk स्थापना गर्नाले तपाईंको सपना पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
खेल एक उत्तम कथा संग सुरु हुन्छ, जहाँ 200+ भन्दा बढी विभिन्न स्थानहरू थपिएका छन्। प्रत्येक स्थान एक अद्वितीय अनुभव र आश्चर्य प्रदान गर्दछ। विकासकर्ताहरूले दाबी गर्छन् कि यसले गेमरहरूलाई एक अद्वितीय खेल अनुभव प्रदान गर्न सक्छ।
तिनीहरूले के गर्न आवश्यक छ केवल यहाँबाट बच्चाहरूको लागि My Town World Games को नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्। र त्यसपछि एन्ड्रोइड स्मार्टफोन भित्र स्थापना गर्नुहोस्। त्यसपछि संसाधनहरूले भरिएको एक उत्तम संसारको संरचना गरेर आफ्नो सपना पूरा गर्नुहोस्।
My Town World Apk के हो
My Town World Apk एक अनलाइन शैक्षिक सिमुलेशन गेमिङ अनुप्रयोग हो। जसले बालबालिका र वयस्कहरूलाई आफ्नो सपनाको संसार निर्माण गर्न सक्षम बनाउँछ। 200 भन्दा बढी नयाँ लुकेका ठाउँहरू भ्रमण गर्दै र 100+ फरक क्यारेक्टरहरूसँग अन्तरक्रियाको आनन्द लिनुहोस्।
हामीले धेरै अन्य सिमुलेशन गेमिङ एपहरू भेट्टायौं। जहाँ विभिन्न अवसरहरू उपलब्ध छन् र राम्रो एनिमेसन प्रयोग गरेर विभिन्न कथाहरू पढ्न रमाईलो गर्न। यद्यपि त्यस्ता गेमिङ फाइलहरू रेन्डरिङ सेवाहरूमा राम्रो छन्।
यद्यपि जब यो गेमरहरूको आनन्द र परिमार्जनको कुरा आउँछ। त्यसपछि हामीले ती उपलब्ध गेमिङ एपहरू प्रकृतिमा सीमित र प्रतिबन्धित पाएका थियौं। केही दिन खेलेपछि धेरैजसो गेमरहरूले आफ्नो स्मार्टफोन बाहिर त्यस्ता गेमहरू छोडिदिए।
यद्यपि गेमरहरूको आवश्यकता र बच्चाहरूको मागमा ध्यान केन्द्रित गर्दै। विकासकर्ताहरूले माई टाउन वर्ल्ड अफ गेम्स भनिने एक अविश्वसनीय गेमिङ अनुप्रयोगलाई संरचित गरे। जहाँ खेलाडीहरूले आनन्द लिन सक्छन् थ्रीडी खेल उन्नत एनिम क्यारेक्टरहरू प्रयोग गरेर HD गुणस्तरमा।
नाम मेरो शहर संसार
आकार 549 एमबी
विकासकर्ता मेरो टाउन खेल लिमिटेड
प्याकेज नाम mytown.mytownworld
श्रेणी खेल - शैक्षिक
जो प्लेटफर्ममा नयाँ छन् र गेमप्ले भित्र धेरै आनन्द उठाए। र साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग खेल खेल्न इच्छुकहरूले निमन्त्रणा URL पठाएर पनि गर्न सक्छन्। निमन्त्रणा प्राप्त र स्वीकार गर्नाले नि:शुल्क प्लेटफर्ममा सामेल हुन मद्दत गर्नेछ।
यद्यपि हामी गेमप्ले भित्र कुनै पनि प्रत्यक्ष सदस्यता देख्न सक्षम छैनौं। तर त्यहाँ खेल भित्र एक विस्तृत स्टोर छ जसले खेलाडीहरूलाई विभिन्न वस्तुहरू छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। त्यस्ता वस्तुहरूको लागि पनि शहरहरू विस्तार गर्न र नयाँ भवनहरू निर्माण गर्न आवश्यक पर्दछ।
निर्माण बाहेक खेलाडीहरूले शिक्षक, फायरम्यान, डाक्टर र प्रहरी आदिको भूमिका पनि खेल्न सक्ने भए पनि विज्ञहरूले भित्र नयाँ नयाँ विकल्प थप्ने योजना बनाएका छन् । र ती नयाँ डिजाइन विकल्पहरू आगमन दिनहरू प्रयोग गर्न पहुँचयोग्य हुन सक्छ।
हामीले यहाँ समर्थन गरिरहेका खेलको नि:शुल्क संस्करणले पहिलो9फरक स्थानहरू2फरक परिवारहरूसँग निःशुल्क प्रस्ताव गर्न सक्छ। जो अगाडि जान र नयाँ स्थानहरू अन्वेषण गर्न इच्छुक छन् उनीहरूलाई वास्तविक पैसा चाहिन्छ। पैसा लगानी नगरी यो असम्भव देखिन्छ।
विभिन्न गुडियाघरहरू अन्वेषण गर्न उपलब्ध छन् र विभिन्न सुविधाहरू अनलक गर्न मद्दत गर्न सक्छ। घरपालुवा जनावर, वस्तुहरू र क्यारेक्टरहरू थप्ने 100+ मिनी सुविधाहरू सहित विभिन्न उपहारहरू र पुरस्कारहरू सहित। त्यसैले तपाईं सपनाको संसार निर्माण गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि My Town World डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
त्यहाँ 200+ विभिन्न स्थानहरू थपिएका छन्।
100+ वर्णहरू छनौट गर्न उपलब्ध छन्।
विभिन्न छाला र प्रभावहरू उपलब्ध छन्।
100+ अद्वितीय सुविधाहरू थपिएका छन्।
गुडिया घरहरू अन्वेषण गर्न त्यहाँ छन्।
बहु उपहार र पुरस्कारहरू पहुँचयोग्य छन्।
नयाँ स्थान र पात्रहरू आगामी दिनहरूमा पहुँचयोग्य हुनेछन्।
खेल इन्टरफेस गतिशील र मोबाइल-अनुकूल छ।
My Town World Apk कसरी डाउनलोड गर्ने
हामीले यहाँ डाउनलोड सेक्सन भित्र प्रस्ताव गरिरहेको संस्करण प्ले स्टोरबाट पनि पहुँच गर्न सकिन्छ। यद्यपि यसलाई प्रतिबन्ध खण्डमा वर्गीकृत गरिएको छ। जसको मतलब केवल योग्य उपकरणहरूले प्रत्यक्ष Apk फाइल पहुँच र डाउनलोड गर्न अनुमति दिन सक्छ।
यद्यपि, Apk पहुँच गर्न योग्य नभएकाहरूले हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामी प्रामाणिक र मौलिक Apk फाइलहरू मात्र प्रस्ताव गर्छौं। गेमरहरूको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न, हामी डाउनलोड सेक्सन भित्र प्रस्ताव गर्नु अघि विभिन्न स्मार्टफोनहरूमा माई टाउन वर्ल्ड एन्ड्रोइड स्थापना गर्छौं।
हाम्रो वेबसाइटमा यहाँ सम्झनुहोस् हामी केवल समर्थन र प्रामाणिक Apk फाइलहरू प्रस्ताव गर्दछौं। जुन आधिकारिक रूपमा Play Store मा पहुँचयोग्य छन् र स्थापना गर्न सुरक्षित छन्। हामीले यहाँ समर्थन गर्ने यो गेमिङ एप पनि मौलिक छ र यसमा कुनै सदस्यता आवश्यक छैन।
धेरै फरक समान एन्ड्रोइड खेलहरू पहिले नै प्रकाशित भइसकेका छन्। ती अन्य पहुँचयोग्य खेलहरूको आनन्द लिन कृपया लिङ्कहरू पछ्याउनुहोस्। तिनीहरु दृश्य छाला ML Apk र प्रेरणा DBT APK.
यसैले तपाइँ शैक्षिक र बच्चा खेल खेल्न मनपर्छ। तैपनि सधैं नि: शुल्क अनलाइन नयाँ खेलहरू खोज्ने प्रयासमा। त्यसपछि यस सन्दर्भमा, हामी ती एन्ड्रोइड गेमरहरूलाई My Town World Apk स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं। त्यो पहुँच गर्न नि: शुल्क छ र कुनै दर्ता आवश्यक छैन।
विभाग शिक्षा, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, मेरो टाउन वर्ल्ड एपीके, मेरो शहर संसार डाउनलोड गर्नुहोस्, बच्चाहरूको लागि मेरो टाउन विश्व खेलहरू, खेलको मेरो शहर संसार मेल अन्वेषण
वर्ल्ड बक्स एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [भगवान खेल]